Dal wayn oo ka tirsan Midowga Yurub oo si xishood la’aan ah u xaalufinaya xeebaha Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dal wayn oo ka tirsan Midowga Yurub oo si xishood la’aan ah...
(Muqdisho) 24 Maajo 2022 – Sanduuqa Caalamiga ah ee Blue Marine Foundation (BLUE) oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha ku saabsan kalluumaysiga xad-dhaafka ah ama sharci darrada ah ayaa sheegay in xeebaha Somalia uu kalluumaysi xaalufis ah ka wado dalka Spain.
Sanduuqan ayaa sheegay inay hayaan caddayn rasmi ah oo muujinaysa in maraakiibta kalluumaysiga ee Spanish-ku ay ku jiraan biyaha Somalia, India & iyo dalal kale oo ka mid ah kuwa soo koraya ee ku yaalla Badwaynta Hindiya.
Waxay kaloo sheegeen inay arrintan ku wargelinayaan Midowga Yurub iyagoo halkaa ku jirey sanado badan oo kasoo bilowda mar hore, balse waxaa hubaal ah inaysan arrintaa waxba ka qaban doonin, maadaama ay haatan joogaan xeebaha Somalia.
Waxay sidoo kale sheegeen in Wasaaradda Kalluumaysiga DF Somalia ay u xaqiijisay inaysan wax rukhsad ah siinnin maraakiibtan Spanish-ka ah ee sida xowliga ah uga jillaabanaya biyaha Somalia.
Previous article”Waa xisaab noocee ah?!” – Norway oo si adag uga jawaabtey dal ka tirsan NATO oo ku baaqay in la qaybsado dakhliga shidaalka dalkaasi
Next articleDal hadda aad ugu gurmanaya Ukraine oo la sheegay inuu wato qorshe hoose oo uu ku damcayo qayb dalkaa ka tirsan